Partation ပိုင်းနည်း သိရင် သင်ပေးကြပါ ခင်ဗျာ။ — MYSTERY ZILLION
Partation ပိုင်းနည်း သိရင် သင်ပေးကြပါ ခင်ဗျာ။
March 2009 edited March 2009 in Help Desk
ကျွန်တော်အိမ်ကစက်ကို Partition ပိုင်းချင်လို့ ကူညီကြပါဦး သူငယ်ချင်းတို့ရေ။ သိတော့သိတယ်
ဒါပေမယ့် မလုပ်ရဲဘူး ဖြစ်နေတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင် အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကို သင်ပေးကြပါခင်ဗျာ။
Win XP ဆိုရင်တော့ Norton Partition Magic နဲ့ သုံးလို့ရတယ်။ Vista ဆိုရင်တော့ gparted နဲ့ Live CD တက်ပြီး ပိုင်းလို့ရတယ်။ အဲ... C: drive ကတော့ ပိုင်းဖို့ သိပ်မလွယ်ဘူးနော်။ C: ကို ပိုင်းချင်ရင်တော့ C: ကို ဖျက်ပြီး Create ပြန်လုပ်တဲ့အခါ လိုသလောက်ပဲလုပ်။ အဲဒီအခါ Free တွေကျန်ခဲ့မယ်။ Free space တွေကို Drive အသစ်ပဲလုပ်လုပ်။ အခြား Driver မှာပဲ ထပ်ဖြည့်ဖြည့် ရပါတယ်။
အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့ window cd ကို boot တက်တဲ့မယ့်အချိန်မှာထည့်ပြီး... boot from cd ကနေလုပ်တာပဲ.။ ပထမဆုံး ကွန်ပြူတာဖွင့်ဖွင့်ချင်း del key or F1 (အခုနောက်ပိုင်းစက်တွေကတော့ del နှိပ်ရင် ရတယ်.. ဟိုအရင်က စက်တွေက F1 နှိပ်ရတယ်..) ပထမဆုံး del နှိပ်ကြည့်ပေါ့ BIOS Setting ထဲ၀င်ဖို့လေ..။ del မရရင်တော့ F1 ပေါ့...။ ပြီးရင် boot sequence မှာ cd drive ကိုရွေး.... ပြီးရင် F10 (Save & quit) နှိပ်ပြီး.. prompt box ပေါ်လာရင် enter ခေါက်ပြီး restart လုပ်လိုက်ပေါ့..။ ပြန်တက်လာရင်ကီးတစ်ခုခုကိုနှိပ်ထားလိုက်ဆက်တိုက်ပေ့ါ... boot with cd.. ဆိုပြီး ငါးစက္ကန့်ပေးပေမယ့် ဆက်တိုက်နှိပ်ထားတာက ပိုစိတ်ချရတယ်.. ဒါဆိုရင် window setup ထဲရောက်သွားပြီ.. ပြီးတော့ သူက repair လုပ်မလုပ်မေးတာတို့ဘာတို့ကို ကျော်လိုက်ပေါ့... ပြီးရင် window တင်မယ့်အပိုင်းရောက်သွားပြီ.. C ကိုနှိပ်ပြီး create new partition လုပ်ပေါ့. အရင်ဟာရှိလို့ဖျက်ချင်ရင် L ကိုနှိပ်ပြီးသွားလေ.. အဲဒီမှာ instruction အစုံကို အောက်မှာရေးထားပါတယ်. . ဆက်ပြောရင် ရှည်ကုန်တော့မယ်... ပြီးတော့ partition ပိုင်းနည်းသာဆိုတယ်. ဘာလုပ်ဖို့ဆိုတာမပါတော့ ပြောဖို့ခက်တယ်... အခုပြောတာ window အသစ်တင်ရင် သုံးတဲ့နည်းပါ.. window ကောင်းသေးတယ်ဆိုရင် ဒီနည်းနဲ့ လုံး၀ မလုပ်ပါနဲ့... ဘာအတွက်ဆိုတာ ပြောပေးရင် ပိုအဆင်ပြေအောင်ညွှန်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်.... Partition Magic software နဲ့လဲ partition များပိုင်းနိုင်ပါတယ်..
သိတော့သိတယ် ဒါပေမယ့် မလုပ်ရဲဘူး ဖြစ်နေတယ်
ရဲရဲသာလုပ်ပါ...:D ဒါမှတတ်မှာ... ကျွန်တော်ဆို အိမ်ကစက်ကို တစ်လတစ်ခါလောက် ၀င်းဒိုးတင် partition ပိုင်းနေကြ.. (စသင်တုန်းကပြောပါတယ်...)လက်တွေ့မှာ အများကြီး အကျိုးရှိတာပေါ့... လက်တွေ့လုပ်ကြည့်ရင် ပိုတတ်ပါတယ်.... လက်ရဲဇက်ရဲနဲ့သာလုပ်ပါ... ပျက်ရင် သားသားပါဘူး...
drive C:\_ မှာ window တင်ထားပြီး သူ့ထဲက free space ကို နောက် drive တစ်ခုလုပ် ချင်ရင် တော့ partition magic ကိုသုံး ရင်အစဉ်ပြေပါတယ်.... ဒါပေမဲ့ တစ်ခုပြသနာရှိနိုင်တာ က process မပြီးသေးခင် မီးပျက်သွားတာ တို့ ပါဝါပျက် သွားတာတို့ ဆိုရင်တော့ ပြသနာရှိနိုင်ပါတယ်... partition magic7ကိုတော့ အသုံးပြုဖူးပါတယ်... သူက CD drive ရှိနေရင် drive D လို့မပေါ်ပဲ E; လို့ပေါ်တတ်ပါတယ်.....စမ်းသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ partition magic7ကိုသုံးစေချင်ပါတယ် အသုံးပြုရတာလွယ်လို့ပါ .. ပြီးတော့ C:\_ ကို ခွဲမယ်ဆိုရင် လဲ သူ့ process မပြီးခင်ပါဝါ မဒေါင်းသွားစေဖို့ အတွက်လဲ သတိပြုစေချင်ပါတယ်..... အစဉ်ပြေပါစေဗျား...:103::103::103: